Echefula na ntanetị na ịre ahịa gị na-anọghị n'ịntanetị! | Martech Zone
Echefula na ntanetị na ịre ahịa gị na-anọghị n'ịntanetị!
Wednesday, June 11, 2008 Sunday, December 10, 2017 Douglas Karr
Omume ndị na-azụ ahịa n'Onlinentanet na-aghọ ihe dị oké ọnụ ahịa nye ndị na-ere ahịa n'onlinentanet, ma a na-elegharakarị ya anya n'ihe banyere ndị na-anọghị n'ịntanetị. Ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị nwere ụlọ ahịa na-ere ahịa, yana ụlọ ahịa dị n'ịntanetị, na-emeso ndị na-ege ntị abụọ iche, na-efu ohere magburu onwe ya ịlele ma soro onye nke ọzọ.
Advanced nchịkọta ngwa dị ka WebTrends, Coremetrics, na Omniture ka elebara anya dị ka sistemụ ịkọ akụkọ mana ijide data ndị ahịa bara uru enwere ike kewaa ma tinye ya n'ọrụ ndị ọbịa akọwapụtara n'ime data gị.
Ndị Na-enye Ọrụ Email jigide kwa data omume. Ejikọtara ya na nchịkọta usoro ndị a nwere ike soro omume nke ndị na-eri ya site na ịpị site na ntụgharị. Usgba ndị ọbịa gị n'ịntanetị na-enye ụzọ dị mfe iji nakọta data a. N’enye gị, ọ bara uru itinye igodo pụrụ iche maka ndị ahịa gị ọ bụla.
Dị nnọọ ka ị nwere ike ịgụnye koodu mkpọsa na mpempe akwụkwọ ozi, ịwube peeji ọdịda ka ịnakọta igodo ndị ahịa pụrụ iche bụ ụzọ dị irè isi nyochaa onye debanyere aha ya. Ibe ọdịda ahụ nwere ike ịnye ikike ịbanye na ahịa ọzọ. Enwere ike ịgbakwunye igodo ahụ na njedebe adreesị weebụ (URL) site na querystring (http://mycompany.com/'s=12345) wee chekwaa na kuki ebe enwere ike ịlele ya n'ụzọ pụrụ iche na saịtị gị.
Ezinaụlọ nwere oke omume ịntanetị nwere ike ekewa site na ozi gị na ndepụta telemarketing, kama nke ahụ, zigara gị ozi - na-enye ozi ezubere iche, nke oge na ọnụ ala dị ala. Ọ dị mkpa iburu n’obi na CAN-SPAM iwu gọọmentị ide na ndụmọdụ kachasị mma bụ ịnakọta adreesị ozi-e n'afọ ofufo ma rụọ ọrụ na aha ọma Email na-eweta ọrụ nke ahụ na-enye ịnapụta na wepu aha na ọrụ iji gbochie gị na nsogbu.
Echefula na ahia gị na-azụ ahịa nwere ike ịkwado ozi ịntanetị gị. Ozi ịntanetị azụmahịa bụ ozi ịntanetị ọ bụla na-atụ anya dịka nzaghachi sitere n'aka onye na-ere ahịa. Di na nwunye di na nwunye bu ikwusi ozi ịgba ụgwọ na / ma obu zuo ozi nkwenye. Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ gị na-akwụ ụgwọ n'ịntanetị, ị na-efunahụ ohere kachasị nke nwere ezigbo ụlọ iji nweta ọnụahịa ma ọ bụ onyinye ọzọ!
Ọ bụrụ na ozi ahụ bụ azụmaahịa, CAN-SPAM ekwesịghị itinye. Naanị jide n'aka na ị gaghị agwakọta ihe ndị ị na-ebute ụzọ dị ka ị ga-esi nweta ezigbo mma. Email Marketing na-enyekwa ọdịnaya dị ike dabere na nkewa ndị ahịa. Nke a na - enye gị ohere igbanwe ozi ma ọ bụ nkwenye nke email sitere na onye debanyere aha gị.
Ozi nye ezinụlọ dị ka ụmụ akwụkwọ kọleji nwere ike ịnwe okwu na eserese dị iche iche - mana ka na-apụ n'otu email ahụ! Njikọ dị na email gị nwere ike ịdeghachi na peeji nke ọdịda ma ọ bụ saịtị ebe usoro njikwa ọdịnaya na-enyekwa ọdịnaya dị ike. Ihe data a bara oke uru nye ndị Mgbasa ozi!
Ikike ijikọ ndị ọbịa gị n'ịntanetị na data igwe mmadụ bụ ohere dị ukwuu iji nye ndị na-achọ mgbasa ozi na profaịlụ na nyocha ihu igwe dị egwu - ọ ga-abụ ihe dị ọnụ ala ma zie ezi karịa ọrụ ịntanetị ndị na-eme ka ha na-enye otu ihe.
Chee echiche banyere isi mmalite data abụọ maka datamart gị: Web Analytics na email Marketing. Leverage data ahụ na azụmaahịa gị na-anọghị n'ịntanetị yana ijikọta ya n'ime mbọ ịre ahịa Email gị! Ga-echekwa ọtụtụ ego na nzipu ozi na-eto eto wee nwee ike ịlele nsonaazụ ozugbo na ntanetị.
Tags: Analyticsnwere ike-spamisi iheozi ederedeemailonye na-enye ọrụ emailespomnitureOmenala ahiawebụsaịtị
Kedu ihe mere Typepad ji mee ihe mgbakwunye WordPress-Spam?
MBP: Micro-ịde blọgụ na Protocol
Jun 13, 2008 na 6:47 AM
Ọ na-atọ ọchị ọ bụghị ya; ndị na-ere ahịa na-etinyekarị otu ụzọ maka ahịa ha. A na-emefu ego tupu oge eruo ma dabere na ịme otu ụzọ ahụ dị na mbụ. Agbanyeghị, ọ bụghị echiche ọgụgụ isi ka achọrọ? Ya mere, atụmatụ ahụ ọ ga - agagharị na ihe kwesịrị ma ọ bụ enwere ike ime ugbu a? Anyị nwere ohere igwu egwu na ngwakọta mgbasa ozi buru ibu karị maka mkpọsa agbakwunyere na akụkọ ntolite anyị na-egosi anyị na ọ bụ ndị na-eche echiche okike na-aghọrọ ụgwọ ọrụ iji mezuo ebumnuche ha.
Maka ụlọ ọrụ, na ụlọ ọrụ, na-anya isi na ihe ọhụrụ, ọ kwesịghị ịbụ ọrụ siri ike ịghọ ihe ọhụụ.